मनोरन्जन – Page4– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२५ श्रावण २०७७, आईतवार ०५:१३ English
कुमारी हल भोलीबाट बन्द १७ कार्तिक २०७६, आईतवार १६:०१
काठमाडौँ, १७ कार्तिक । कुमारी हल बन्द हुने भएको छ । कमलपोखरीस्थित कुमारी हल भोलीदेखी एक महिनाका लागि बन्द हुने भएको हो । उक्त हल क्यूएफएक्स चेन अन्र्तगतको हो । हल मर्मतका लागि बन्द गर्न लागिएको हो..
जिग्री–पाँडे र ‘मिडिया हब’बीचको विवाद सुल्झियो ८ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १०:२२
काठमाडौँ, ८ कार्तिक । मिडिया हब प्रा.ली. र नेपाली हाँस्य टेलिश्रृङ्खला ‘सक्किगोनी’बीचको तनाव सुल्झिएको छ । दुवै पक्ष बसेर विवाद आपसी समजदारीमा टुंगोमा पुर्याएका हुन् । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने हास्य टेलिसिरियल ‘भद्रगोल’मा अभिनय गरेका पात्रहरु नै ‘सक्किगोनी’मा समेत नियमित..
साकार पन्तको निर्देशनमा बन्ने भो फिल्म ‘हिजो आजका कुरा’ ५ कार्तिक २०७६, मंगलवार ०५:१६
काठमाडौँ । सन्तोष पन्त निर्देशित नेपाल टेलिभिजनको बहुचर्चित कार्यक्रम ‘हिजो आजका कुरा'लाई छोरा साकार पन्तले फिल्म बनाउने घोषणा गरेका छन् । फिल्म निर्मण घोषणा कार्यक्रममा विगत सम्झँदै पन्तले भने, 'मध्यमवर्गलाई लक्षित गरी तीज, दसैं, माघेसंक्रान्तिका कथादेखि नेपालीकै व्यथालाई..
प्रधानमन्त्रीलाई जीवन शर्माको उत्तर,‘मलाई अहिले सहयोग चाहिँदैन’ ४ कार्तिक २०७६, सोमबार १७:२३
काठमाडौँ, ४ कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनवादी गायक जीवन शर्मालाई निवासमै बोलाएर भेट गरेका छन् । शर्मालाई आफ्ना छोराको उपचार गर्न आर्थिक अभाव भएको भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै बोलाएर उनीसँग भेट गरेका हुन् । आइतबार दिउँसो..
दुर्गेश थापा विरुद्द उजुरी, खोज्दै प्रहरी ४ कार्तिक २०७६, सोमबार १५:५२
काठमाडौँ, ४ कार्तिक । ‘ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर’ बोलको गीत गाएका कारण गायक दुर्गेश थापा विवादमा तानिएका छन् । गीतभित्र प्रयोग भएको ‘ए निकाल गाँजा, खानुपर्छ आज’ अंश निकै कानुनी रुपमा नै विवादित बनेको छ । गाँजा कानुनी रुपमै प्रतिबन्धित नशालु पदार्थ हो । तर त्यही गाँजा खानुपर्छ भन्दै..
पाँडे र जिग्री विरुद्ध मिडिया हबले दियो उजुरी ३ कार्तिक २०७६, आईतवार १३:५६
काठमाडौँ, ३ कार्तिक । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने हास्य टेलिश्रृंखला ‘सक्किगोनी’ को टिमविरुद्ध मिडिया हबले उजुरी दिएको छ । उनीहरु विरुद्ध कपिराइटको उजुरी परेपछि प्रहरीले अर्जुन घिमिरे पाँडे र कुमार कट्टेल जिग्रीको समूहलाई बोलाएको छ । अर्जुन घिमिरेले मिडिया हबले यसअघिका..
गोङ्गबुमा अत्याधुनिक सिनेमा हल सञ्चालनमा ३ कार्तिक २०७६, आईतवार ०९:०७
काठमाडौँ, ३ कार्तिक । काठमाडौँको गोङ्गबुमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सिनेमा हल ‘आईएनआई’ सञ्चालनमा आएको छ । आईएनआई सिनेमा हलले आधुनिकता समायोजन गरी दर्शकहरुको मन जित्ने प्रयास गरेको छ । यसमा अरुको तुलनामा ठूलो स्क्रीन र आकर्षक पिक्चर क्वालिटी रहेको छ भने विलासितापूर्ण आरामदायी..
गायक शिव परियारको ‘निष्ठुरी’ सार्वजनिक ११ आश्विन २०७६, शनिबार ०७:१२
काठमाडौँ, १० असोज । गायक शिव परियारको आवाज तथा सञ्चारकर्मी रवि अधिकारीको शब्द रहेको ‘निष्ठुरी’ बोलको नयाँ गीत आज सार्वजनिक गरिएको छ । शशान कँडेलले निर्देशन गरेको माया, प्रेम र धोकाको कथा बोकेको उक्त गीत आज नमस्ते फिल्मीको अफिसियल युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ । गीतमा चोखो..